ဟယ်ရီကိန်း အတွက် အသင့်တော်ဆုံး အသင်းကို ပြောပြလိုက်တဲ့ စပါး နည်းပြဟောင်း - SPORTS MYANMAR
ဟယ်ရီကိန်း အတွက် အသင့်တော်ဆုံး အသင်းကို ပြောပြလိုက်တဲ့ စပါး နည်းပြဟောင်း
April 2, 2020 - by Editor
တော့တင်ဟမ် နည်းပြဟောင်း ဖြစ်သူ ဟယ်ရီရက်နက်က ဟယ်ရီကိန်း အနေနဲ့ လန်ဒန် ကလပ်မှာ သူ့အနာဂတ်ကို ပြန်လည် မေးခွန်း ထုတ်နေလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည် နေပြီး အင်္ဂလန် စတားဟာ မန်ချက်စတာ စီးတီး အတွက် အရမ်းကို ကောင်းမွန်တဲ့ ကစားသမား ခေါ်ယူမှု အဖြစ် သက်သေ ပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
ကိန်းဟာ ယခုတစ်ပတ် မှာပဲ သူ့ရဲ့ အနာဂတ် နဲ့ ပက်သက်ပြီး ပြောကြားမှုတွေ ရှိခဲ့ကာ ကစားသမား ဘ၀ အကောင်းဆုံး အချိန်ကို ရောက်ရှိ နေပြီ ဖြစ်တာကြောင့် အနာဂတ် နဲ့ ပက်သက်ပြီး စဉ်းစားလျက် ရှိနေကာ လာမည့် အပြောင်းအရွေ့ မှာတော့ တစ်စုံတစ်ရာ ထူးခြားမှု ရှိသွား နိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိ မှာတော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကို ကိန်း ကို အထူး စိတ်ဝင်စားမှု ပြသလျက် ရှိနေတဲ့ အသင်းတွေ ထဲက တစ်သင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလန် တိုက်စစ်မှုးဟာ အိုးထရပ်ဖို့ဒ်ကို ပြောင်းရွေ့ရန် လမ်းဖွင့် ထားတယ်လို့ ဆိုထား ပေမယ့်လည်း ၎င်းကို ခေါ်ယူချင်တဲ့ ဘယ်အသင်း မဆို စပါး ရဲ့ တောင်းဆိုမှုကို လိုက်လျော နိုင်ရန် လွယ်ကူမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ရက်နက် ကတော့ ကိန်းကို စပါးမှာ ဆက်ရှိနေဖို့ မျှော်လင့် နေပေမယ့်လည်း သူ့တပည့်ဟောင်းဟာ မကြာမီ အသင်းပြောင်းဖို့ ဆုံးဖြတ် သွားနိုင်တယ်လို့ ယူဆ နေပါတယ်။
မန်ချက်စတာ စီးတီး ဟာ လာမည့် ဇွန်လ မှာ အသက် ၃၂ နှစ် ပြည့်တော့မှာ ဖြစ်တဲ့ တိုက်စစ်မှုး ဆာဂျီယို အဂွေးရိုး ရဲ့ နေရာကို အစားထိုးရန် ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှု လုပ်နေခဲ့ကာ ရက်နက် ကတော့ ယူနိုက်တက် ရဲ့ မြို့ခံ ပြိုင်ဘက် ကသာ ကိန်း အတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အသင်း ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုသွား ပါတယ်။
ကိန်း က “ကျွန်တော် ပြောချင်တာ ကတော့ ကိန်းဟာ ရည်မှန်းချက် ကြီးတဲ့ ကောင်လေးပါ။ သူဟာ အရမ်းကို ကောင်းတဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဖြစ်ပြီး တကယ် တော်တဲ့ ကောင်လေးပါ။ သူဟာ ပွဲတွေ အများကြီး ကစားချင်ကာ ဆုဖလားတွေလည်း ရယူ ချင်ပါတယ်။ တော့တင်ဟမ်ဟာ လာမည့် နွေရာသီမှာ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ငွေကြေး သုံးစွဲ သွားမှာလား? လာမည့် တစ်နှစ် နှစ်နှစ်မှာ ငွေကြေး များစွာ သုံးစွဲကာ နာမည်ကြီး ကစားသမားတွေ ခေါ်ယူ သွားမှာလား?
သူ ဒါတွေကို ကြည့်နေ နိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေကို အခြေခံပြီး ဆုံးဖြတ် နိုင်ပါတယ်။ ထိပ်တန်း ကလပ်တွေ အတွက် ကတော့ သူဟာ ဘယ်လောက်တောင် ကောင်းလိုက်တဲ့ ကစားသမားလဲဗျာ။ ကျွန်တော် ကတော့ သူ တော့တင်ဟမ် ကနေ ထွက်ခွာ သွားတာကို မမြင်ချင် ပါဘူး။ တော့တင်ဟမ် ပရိတ်သတ်တေ ကလည်း တူတူပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အဂွေးရိုး ရဲ့ အဆုံးသတ် ရောက်လာတော့မယ့် အချိန်မှာ သူဟာ မန်စီးတီး အတွက် ဘယ်လောက်တောင် ကောင်းလိုက်တဲ့ အထောင် တိုက်စစ်မှုးလဲ ဆိုတာ စဉ်းစား ကြည့်ပါဗျာ။
သူဟာ ဘယ်အသင်း မဆို အတွက် အရမ်း ကောင်းတဲ့ ကစားသမား ခေါ်ယူမှုပါ။ သူဟာ ကြီးကြယ်တဲ့ ကစားသမား ဖြစ်ပြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ကျသူပါ။ သူ တော့တင်ဟမ်မှာပဲ ဆက်နေ သွားဖို့ မျှော်လင့် ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စပါးတို့ ဖလားတွေ မရနိုင်ဘူးလို့ သူခံစားမိ ခဲ့ရင် သူ ဒီမှာ ဆက်ရှိ နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။” လို့ ဆိုလိုက် ပါတယ်။
စပါး ကတော့ ၎င်းတို့ရဲ့ အဓိက ကစားသမားကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်း သွားဖို့ အလို ရှိနေပြီး တော့တင်ဟမ် ကစားသမားဟောင်း အိုဟားရား ကတော့ ကိန်း အတွက် အကောင်းဆုံး ဈေးကို ရနိုင်မယ့် အချိန်မှာ ရောင်းထုတ်ပြီး အသင်းကို ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု လုပ်သွားရန် တောင်းဆို လိုက်ပါတယ်။
အိုဟားရားက “တော့တင်ဟမ်ဟာ အသင်းကို ပြန်လည် တည်ဆောက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အသင်းကို ပြောင်းလဲဖို့ အတွက် လိုအပ် နေရာတွေကို အင်အား ဖြည့်တင်းဖို့ အတွက် ကစားသမား ၄ ယောက် ၅ ယောက်လောက် ခေါ်ယူ သွားရမှာပါ။ ဟယ်ရီကိန်း စိတ်ပျက် နေတာကို ကျွန်တော် နားလည်ပါတယ်။ သူဟာ ကမ္ဘာ့အဆင့် ဖြစ်ပြီး မြင့်မားတဲ့ တန်ကြေးရှိတဲ့ အချိန်ကို ရောက်နေပါပြီ။
အကယ်၍ လာမည့် စပါးမှာ လာမည့် ၂ နှစ် ၃ နှစ် အတွင်း ဆုဖလားတွေ မမြင်ရဘူး ဆိုမှသာ အသင်းဘက်က ရောင်းထုတ် သွားဖို့ ဆန္ဒ ရှိနေမှာပါ။ အကယ်၍ ဟယ်ရီကိန်းကို ရောင်းထုတ် သွားမယ် ဆိုရင် သူ့ကို ကစားသမား ဘ၀ အကောင်းဆုံး အချိန်မှာ ရောင်းချ သွားရပါမယ်။ သူဟာ ဈေးကွက် တန်ဖိုးအရလည်း အမြင့်ဆုံး အချိန်ကို ရောက်ရှိ နေပါတယ်။” လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။